ဝင်စားသုတေသန ဝင်စားသုတေသနကြယ် - ဝင်စားသုတေသန
ReincarnationResearch.com မှလှူဒါန်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြယ်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အလှူငွေဘာသာပြန်ဆိုရန်အသုံးပြုလိမ့်မည် မှ Ian Stevenson, ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်က MD အားဖြင့်လေ့လာခဲ့အများအပြားအပါအဝင်သော့ချက်လွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုဝင်စားဖြစ်ပွားမှု,, ဘာသာစကားမျိုးစုံသို့။
ဤအဝင်စားဖြစ်ပွားမှု၏ဖြန့်ဝေကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံတစ်ဦးထက်ပိုသောငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာကြီးဖန်တီးကူညီပေးပါမည် ဘာသာ, နိုင်ငံသား, တိုင်းရင်းသားဆက်နွယ်မှုပြောင်းလဲနိုင်သည် တစ်သက်တာ မှစ. အခြားရန်။
ဘာသာပြန်ချက်များအတွက် protocol ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Mission Statement.
ညာဘက်ပေး Images ကိုအောက်တိုဘာလ 2008 အတွက် Marina del Rey, California မှာကျင်းပကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်စားညီလာခံကနေဖြစ်ကြသည်။